Chrome OS ikozvino inowirirana nezvirongwa zveGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Chrome OS ikozvino inowirirana nezvirongwa zveGnu / Linux
Yakanga isiri nguva refu yapfuura kuti vashandisi veChromium vakawana makeover muwebhusaiti yavo. Iyi yaive mhedzisiro yeshanduro nyowani yewebhu webhu yakaunza nekutaridzika kutsva. Asi iyo webhurawuza haisi iyo yega chinhu chakagadziriswa. Google yakaburitsa vhezheni nyowani kana kugadzirisa yeinoshanda system, Chrome OS nemidziyo yayo. Nekudaro, pamwe neiyi nyowani vhezheni, chromebook vashandisi vachakwanisa kuisa avo avanofarira maGnu / Linux application.
Hongu, kubva zvino zvichienda mberi, Chrome OS haizongomhanyisa ayo maapplication chete asi zvakare inomhanya neApple maapplication uye Gnu / Linux maapplication, nekudaro ichiva chekutanga chekushandisa maererano nenhamba yezvirongwa, pamusoro peiyo yekare Windows.
Iyo vhezheni yatinofanira kutsvaga kuti tiise iyo Gnu / Linux application iri nhamba 69, asi Google yambiro kuti rutsigiro urwu rwuchiri mubeta, saka zvinogona kukonzera matambudziko nekumwe kunyorera. Chii chimwe mamwe mamodheru ema Chromebook haazokwanisi kumhanyisa izvi zvinoshandiswa nekuda kwenyaya dzenhombo. Tinogona kutarisa runyorwa rweanowirirana zvishandiso kuburikidza Iyi link.
Chero zvazvingaitika, zvinyorwa zvekuburitswa izvi zvinotaura nezvazvo kushanda kwakaringana kweiyo emulator, Kugadzira Windows mafomu kumhanya mukati meiyo Chrome OS pachayo. Iyo nyowani vhezheni yeChrome OS haingounze ichi chitsva chete asi zvakare inowedzera chishandiso chinonzi maFiles chinotibvumidza kusevha magwaro uye marongero anozotumirwa kuGoogle Play account.
Chrome OS inoenderana nekuvandudzwa kweChromium OS, vhezheni yemahara uye yakafambira mberi mukuvandudza kuChrome OS, saka kana tiine matambudziko neiri basa nyowani tinogona kugara tichienda kuChormium OS uye dambudziko iri rinogona kunge rakagadziriswa. Chii chimwe, Chromium OS ndeye yemahara inoshanda sisitimu iyo ine zvirambidzo zvishoma pane Chrome OS.
Ini pachangu handidi Chrome OS zvakanyanya asi ndinofanira kubvuma izvozvo mukati memwedzi yekupedzisira Google iri kuita chirongwa ichi uye izvo zviri kuita kuti akawanda matsva maficha aoneke senge kuenderana neApple maapplication kana Gnu / Linux zvinoshandiswa Ko macOS maapps anotevera here? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chrome OS ikozvino inowirirana nezvirongwa zveGnu / Linux
Canonical Inozivisa Ubuntu 14.04 LTS Yakawedzerwa Kuchengetedzwa Kwekuchengetedza